बाबुराम भट्टराईसहित ३३ सांसदले फिर्ता गरेनन् दसैं भत्ता -
Voice Np	प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ०९, २०७७ समय: २१:४०:३८
काठमाडौं । गत कात्तिक पहिलो साता सांसदहरुले दसैं भत्ता लिएको समाचारले धेरैको ध्यान तान्यो । यो विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले पनि भूमिका खेले ।
सर्वत्र आलोचना भएपछि सांसदहरुले धमाधम दसैं भत्ता फिर्ता गरे । तर, तिनै डा. भट्टराईले भने अझैसम्म दसैं भत्ता फिर्ता गरेका छैनन् ।
जसपा बाहेक स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहेका राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले पनि दसैं भत्ता फिर्ता गरेका छैनन् ।
संसद सचिवालयका अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसले पत्र लेखेर पार्टीका सांसदहरुको दसैं भत्ता कोरोना कोषमा पठाउन आग्रह गरेका थिए । सोहीअनुसार नेकपा र कांग्रेसका सांसदको कार्तिक महिनाको तलब पठाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
संसद सचिवालयका अनुसार सांसदहरुको दसैं भत्ताबाट कोरोना कोषमा करिब २ करोड जम्मा भएको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिनाले ६७ हजार ३२० रुपैयाँका दरले दसैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा हुने गरी फिर्ता गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले दसैं भत्ता वापतको भनेर ७० हजार ७३० रुपैयाँ कोरोना कोषमा जम्मा गरेकी छन् ।
‘१५ दिनको तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भनेर अन्य पार्टीको पत्र आयो तर, तत्कालीन समाजवादीका कुनै सांसदले न व्यक्तिगत रुपमा पत्र पठाए, न त पार्टीका तर्फबाट । त्यसकारण, उहाँहरुको १५ दिनको तलब कोरोना कोषमा गएको छैन’ सचिवालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
‘के गर्ने ? भनेर पटक–पटक भनियो तर, पार्टीको चिठी नआएसम्म केही नगर्नु भन्ने उतिबेलाको जवाफ थियो’ संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने ।